Tafahitsoka any Vietnam: mampody ny eropeanina ny Banks Airways
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Tafahitsoka any Vietnam: mampody ny eropeanina ny Banks Airways
Airlines • Airport • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Momba ny Tseky • Vaovao • Safety • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Miara-miasa amin'ny Masoivoho Czech ao i Vietnam, ny 25 martsa lasa teo, ny Bamboo Airways dia niasa sidina fanampiana maha-olona avy any Hanoi ny Prague - ny renivohitry ny Repoblika Tcheky ny mampody Olom-pirenena eropeana.
Mandritra izany fotoana izany, ny sidina dia mandefa ihany koa ireo entana fanampiana ara-pahasalamana nomen'ny Governemanta Vietnamianina ny Repoblika Tcheky manohana ny Repoblika Tcheky amin'ny famahana ny tsy fahampian'ny fitaovam-pitsaboana rehefa mihasarotra ny toe-javatra Covid-19.
Miala ny sidina amin'ny 8: 20 pm ny 25 martsa avy eo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Noi Bai - Hanoi ny Prague, Repoblika Czech, mitondra mpandeha Czech sy eropeana 280.
Bamboo Airways dia mampiasa ny Boeing 787-9 Dreamliner amin'ny vatany malalaka hampandehanana io sidina manokana io. Amin'ny maha-iray amin'ireo fiaramanidina maoderina an-kalamanjana indrindra an'ny fianakaviana 787, ny Boeing 787-9 Dreamliner dia manana fitaovana manara-penitra mba hampihenana ny havizanan'ny mpandeha mandritra ny sidina lavitra.
Ireo mpandeha izay te-hamandrika ity sidina ity dia afaka mifandray amin'ny masoivoho Czech ao i Vietnam mivantana ho an'ny antsipiriany bebe kokoa.
Ny sidina no sidina voalohany tsy misy fijanonan'ny kaompaniam-pitaterana vano anatiny any Vietnam Repoblika Tcheky misaotra ny fiaraha-miasa eo amin'ny masoivohon'i Czech ao i Vietnam ary Banks Airways. Mbola manan-danja kokoa aza ny sidina rehefa manatratra tanjona ara-tsosialy sy maha-olona raha izao tontolo izao dia miray tanana amin'ny ady amin'ny Covid-19.
Fitsipika henjana hiantohana ny fiarovana
Mba hampihenana ny loza ateraky ny fifindran'ny aretina dia nilaza ny solontenan'ny Bamboo Airways fa ny Airline dia manara-dalàna sy manaraka tanteraka ny lalàna mifehy, ny tolo-kevitr'ireo manampahefana anatiny sy ivelany.
Ny ekipa mpanamory fiaramanidina, serivisy ary mpiasa teknika amin'ity sidina ity dia olona manana traikefa sy manam-pahaizana manokana izay voafantina tsara sy nampiofanina mba hiantohana ny fiarovana ara-pahasalamana faratampony ho an'ireo mpandeha sy ekipa.
Ny Airline koa dia miara-miasa amin'ny manam-pahefana hijery ny fahasalaman'ny mpandeha rehetra alohan'ny hidirany.
Rehefa tafaverina avy Prague, ny fiaramanidina dia ho voan'ny otrikaretina ao amin'ny efitranon'ny akoho, mpandeha ary entana arak'ireo fenitra avo lenta indrindra hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny virus.
Manamafy Orina i Vietnam - Fifandraisana Czech
Ny fiasan'ity sidina ity dia mampiseho ny ezaka miaraka amin'ireo masoivoho diplomatika sy mpandeha ao anatin'ny Covid-19. Manantena ny sidina ny Bamboo Airways Hanoi - Prague dia hanampy amin'ny fanamafisana ny i Vietnam - Repoblika Tcheky fifandraisana sy fiaraha-miasa, indrindra amin'ny taona 2020 rehefa mankalaza 70 taona ny firenena roa tonta amin'ny fametrahana fifandraisana diplomatika.
Ao amin'ny drafitry ny fampivoarana ny tambajotram-panidina iraisam-pirenena an'ny Bamboo Airways, ny Repoblika Tcheky no toerana voalohany ihany koa amin'ny toeran'ny “vavahady vaovao” an'ny kaontinanta.
Hatramin'ny faran'ny taona lasa dia nahavita ny fanomanana ny fampandehanana ny zotra mivantana ny Bamboo Airways Hanoi - Prague miaraka amin'ny fahita matetika sidina 2 isan-kerinandro ary mety hitombo arakaraka ny filan'ny mpandeha. Ity zotram-piaramanidina ity dia antenaina hapetraka raha toa ka milamina tsara ny fepetra eo amin'ny tsena mba hiantohana ny fiarovana ara-pahasalamana faratampony ho an'ny mpandeha.